Iyo Nexus Mod Manager inokubvumira iwe kunyatsoisa nekuburitsa chero mods yemitambo, uye zvakare kuvamisa iwo zvichienderana nezvaunoda.
Kugadzirisa iyi nyaya, unofanirwa kuyananisa zvekare mitambo yako yawakaisa, ita shuwa kuti urikuyedza kushandisa ma mods akakodzera, uye ita shuwa kuti antivirus yako haisi kuvharira app.
Kana iwe uchida kutarisa mamwe maitiro anoshanda, iwe unogona kutarisa edu ega Kubhejera peji rewebhu.
Kuti uve nechokwadi chekuti unogara uchingobaya kure nekuwana magwara anobatsira, usakanganwa kumaka bookmark yedu yakakura Windows 10 Hub.
The Nexus Mod Mutariri (NMM), sekududzwa kwezita, isoftware inokutendera kuti ubate zvinobudirira maNexus mutambo wako mods kubva kune mushandisi-anofarira hub.
Nhamba huru yevashandisi vakashuma kusangana nekukanganisa Nexus mod maneja haina kuiswa kuti ishandise neSkirim. Iyi nyaya inogona kukonzera kushushikana kwakanyanya, kunyanya kune vateveri vakaoma-vakafa veiyo mutambo wenhabvu.
Hezvino zvakataurwa nemumwe mushandisi nezvenyaya iyi pane Nexus Mods foramu:
Ini ndinoda kukwikwidza mumwe munhu nekuti iyo mharidzo yekukanganisa Nexus Mod Manager haina kumisikidzwa kushanda ne Skyrim. Kana Skyrim yaiswa, kununura yemitambo yakaiswa kubva pane shanduko yematimu ekugadzirisa chinhu. inoramba ichiputika pese pandinoyedza kurodha mod kubva kuNexus ine Mod Manager. Pese pandinoedza kurodha mods chikanganiso chakakanganisika chinoramba chichiputika. Ndokumbirawo mubatsire.
Iyi nyaya inoita kunge yaonekwa pane akasiyana masisitimu ehurongwa, saka dambudziko nekugona kwePC yako kunze kwemubvunzo. Zvichataurwa, takatora nguva yekutsvaga zvakakonzera zvikonzero, uye nzira dzakanakisa dzekushandisa mune ino kesi.
Verenga kuverenga kuti uwane zvimwe zvinhu.
Chii chandingaite kana Nexus Mod Manager isingashande neSkirim?
1. Rescan yemitambo yakaiswa
Vhura iyo Nexus Mod Mutariri App.
Click on Shandura Game chishandiso.
sarudza Skyrim kubva pakurongwa.
dzvanya Ok kununura ma cache kubva yako yakaiswa Skyrim mutambo.
2. Ita shuwa kuti urikushandisa mods dzakakodzera yeshanduro yako yeSkirimi
Kunyangwe zvingaite sekunge idanho riri pachena, vamwe vashandisi vakangogadzirisa dambudziko ravo nekushandisa mods yakakodzera yeshanduro yeSkyrim yavakaisa.
Kana iwe ukaisa iyo yekare shanduro yemutambo, tora mods kubva ino Skyrim peji rewebhu.
Kana iwe uchishandisa shanduro itsva yemutambo, edza kurodha ma mods auri kuda kubva kune mukuru Skyrim Inokosha Edition peji rewebhu.
Cherechedza: Skyrim uye Skyrim Nhoroondo Yezvinyorwa akafanana mutambo, nepo wokupedzisira anouya akasungwa nezvose zvitatu DLC's iripo yekubudiswa kwekirasi.
3. Bvisa iyo Nexus Mod Manager mushandisi zvigadziriso
Vhura iyo Windows mupanguri.
Famba uchienda kunzvimbo inotevera pane yako zvakaoma ngarurege: C: Vashandisi -> rako rezita -> appdata -> yemuno -> Nhema Muti Kutamba -> imwe yekunamatira -> mod -> vhezheni nhamba
Mune iyi folda, iwe uchakwanisa kuwana kana imwe kana akawanda mafaera.
Kudzima vese zvavo.
Dzorerazve kombiyuta yako kuitira shanduko kuti itange kushanda.
Vhura iyo Nexus Mod Mutariri app, uyezve kugadzira yako mushandisi zvichibva pane zvaunofarira iwe.
Tarisa uone kuti ma mods anoshanda here.
Ndiwe wako Windows Faira Explorer ichirovera mukati Windows 10? Edza izvi zvigadziriswe
4. Ita shuwa kuti firewall yako haisi kuvharira Nexus Mod Manager
Bvumira application kuburikidza Windows Defender Firewall:
Chindai Win + X makiyi pane kenduru yako uye sarudza Settings.
Baya Kuvandudza nekuchengetedza bhatani.
Sarudza iyo Windows chibatiso sarudzo kubva kumenyu kuruboshwe rwechidzitiro chako.
Baya Firewall uye network kuchengetedzeka kuita.
Sarudza sarudzo Bvumidza iyo app kuburikidza neye firewall.
Tsvaga iyo Nexus Mod Mutariri mune rondedzero uye bvumidza zvese zviri kuuya uye zvinobuda kubatana.
Dzorerazve PC yako uye edza kumhanya mods zvakare.
Kana iwe usingakwanise kuwana iyo Windows firewall marongero, zvinoreva kuti hauna kodzero dzemubati. Kuti uone kuti iwe unogona sei kugonesa yako Administrator account, tarisa pane izvi nyore mutungamiri.
5. Reinstall iyo Nexus Mod Manager
Chindai Win + X makiyi uye sarudza Zvirongwa uye maficha.
Sarudza iyo Nexus Mod Mutariri kubva pakurongwa.
Chindai Uninstall bhatani.
Baya Uninstall bhatani zvakare kuratidza.
Mirira kuti chirongwa chacho chizadzike.
Download Nexus Mod Mutariri nokunyanya manyuwari bhatani pane webhusaiti.
Mirira kuti chirongwa chekuodha chizadzise.
Vhura iyo yekuisa uye tevera iyo-skrini mirayiridzo.
6. Shandisa Vortex app kubata yako Nexus mutambo mods
Dhawunirodha iyo Vortex application.
Isa iyo nekutevera pane-skrini mirayiridzo.
Edza kubata ako asina mhaka Skyrim mods uye tarisa kuti uone kana nyaya yacho yagadziriswa.
Mukutungamira kwanhasi, isu takatarisa nzira dzinoshanda kwazvo kuti uedze kana ukaona Nexus Mod Manager haina kumisikidzwa kushanda neSkirim error message.
Usazengure kugovera ruzivo rwako nesu, uye tipeiwo chero mazano ekuti makagadzirisa sei dambudziko iri.
Kuti ubate isu, iwe unogona chete kushandisa chikamu chekutaura chinowanikwa pazasi kwechinyorwa ichi.
MIBVUNZO: Dzidza zvakawanda nezveSkim
Ini ndinogadza sei manna Nexus mods?
Kana iwe uine iyo faira yemodhaunirodha, uye zvakare Nexus Mod Manager yakaiswa paPC yako, unogona kungoisa mod kune iyo chinyorwa, wozoishandisa. Mushure mekunge maita saizvozvo, ichaonekwa mu Kufakiwe Mods list.
Ini ndinoshandisa sei Nexus Mod Manager ane Steam?
Iwe unozoda kuvhura Steam, famba kune yako Mitambo Raibhurari, sarudza mutambo waunoda, wobva wadzvanya Tarisa mumusangano bhatani. Izvi zvinokuzivisa iwe nerondedzero yemods iwe yaunogona kuisa nekudzvanya pane Subscribe bhatani.
Nexus Mods ndeye PC chete here?
Ehe, iyo Nexus Mod Manager inongopa kugona kwemitambo yePC kuti modered. Izvo zvinoita sekunge sepuratifomu richichinjira kumitambo yekushandurwa kwemamwe mapuratifomu, sezvo kazhinji kuchikanganisa.